(ဒီကဗျာကို ကိုမောင်ရင်က ဒီလို ဆင့်ပွားခံစားထားပါတယ်။)
တခါတခါတော့လည်း ကိုယ့်ဦးထုပ် ကိုယ် ကိုက်စားလိုက်ချင်
ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး ဆိုပဲ
တရားဝင်လုပ်ကွက် ချမပေးတဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုမှာ
ငါတို့က ဒီဘူတာကို နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဆိုက်လာပြီ
တိုင်ထောက် ကြိုးတိုင်း မြေပုံဆွဲမှတ်
ကာကွယ်ဆေးတွေ စူးစူးရှရှ ထိုးကြ
ဖိနပ်တွေ တစတစ ပါးလာ
ညတွေဆို တော်တော်နဲ့ မအိပ်ဘူး
(ဘာကြီးလဲ ဟုမေးသူများ (ရှိခဲ့ရင်) - ကဗျာ အပါအ၀င် အနုပညာကို ရူးသွပ်ကြသူများအတွက် အနည်းငယ် ခံစားရေးပါသည်။)
Posted by pandora at 9:51 AM
ဘာကြီးမှန်း မသိပေမယ့် ကြိုက်တယ်.:)
ညတွေဆို တော်တော်နဲ့ မအိပ်ဘူး”
အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ ဘလော့ဂါတချို့ ရှိသဗျို့ :P
မနေ့ညက အိပ်မရချိန်မှာ ရေးချင်နေခဲ့တာ
ဘာကြီးလဲလို့ မေးလို့ မအားတော့ပါဘူး။ နောက်တခါဆိုရင် မမလေး ကဗျာကို မဖတ်ရဲတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အတွေးတွေ အလုပ်ရှုပ်လို့။ တရားဝင် လုပ်ကွက် ချမပေးတဲ့ နှလုံးသား တစ်ခုမှာ အဖမ်းအဆီးတွေ တယ်များသကိုး ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ကို တော်တော်သဘောကျတယ်။ ကျင်းပြိုတော့ တချို့ ထွက်ပြေးကြ ဆိုတာကို တွေ့တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်မလုံဘူး။
ညတွေဆို တော်တော်နဲ့ မအိပ်ဘူး)
ဟိုက်ရှားပါး….ကောင်းလိုက်တဲ့ကဗျာ… ၂ခေါက်ဖတ်သွားတယ်… မအိပ်ခင် ၁ခေါက်…နက်ဖြန် ၁ ခေါက် ဖတ်ဦးမယ်….
ကို အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျို့ ။
ဒီကဗျာလေး အတော်ကြိုက်တယ် မပန်..
ငါတို့က ဒီဘူတာကို နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဆိုက်လာပြီ”
မာယာကော့ဗ်စကီးရဲ့ ဘယ်ဘက်ရင်အုံ ထဲ မြက်ပင်တွေကြားမှာ ပန်းရိုင်းတွေပွင့် နေလေရဲ့ဗျာ..။
August 18, 2007 at 1:22 PM
ရာဇာကျော်. ဘာကြီးမှန်းမသိလို့ ကြိုက်တာမဟုတ်လား
မယ်မောင် - ဘယ်သူတွေများလဲကွယ်.. ဟဲဟဲ
ဆရာမ - အိပ်မက်အရ ရေးလိုက်တာလေ
ကိုစေးထူး - မဖတ်ရဲရင် မျက်စိကို လက်ချောင်းလေးတွေကြားက ချောင်းဖတ်
လေးမ - အဲဒါနဲ့ တော်တော်နဲ့အိပ်မရ ဖြစ်တော့မှာပဲ
မောင်တိန် - ကြိုက်ရင် ဆွဲသွားကွာ
ဇနိ - ဒုက္ခက ပျားရည်လိုချိုတယ်
ညီညီ - ကျေးဇူးပဲညီညီ။ တိုက်ဆိုင်ကြတယ်ထင်တယ်။
မောင်တက် - ဆောရီး အဲဒီပန်းရိုင်း မြက်ရှင်းရင်း ပါတွားတယ်ကွယ်
မကေ - ကိုမောင်ရင်ကိုပဲ လေးစားပါ မကေရယ် ။ ပန်ဒိုရာက ဒီလောက်အလေးအနက် မရည်ရွယ်ခဲ့ရိုး အမှန်ပါ။
မပန် မအားတာနဲ့ ဘလော့တွေ မဖတ်ဖြစ်တာ ကိုမောင်ရင့်စာကို ဖတ်ပြီးမှာ မပန်ကဗျာကို ပြန်လာဖတ်ဖြစ်တယ်။ ကောင်းတယ် ဆိုတာထက် ကောင်းတဲ့ ကဗျာပဲ။ အင်း ကဗျာရေးသူရဲ့ အတွေးရော ၊ ဆင့်ပွားခံစားသူရဲ့ အတွေးရောကို အလေးပြုလိုက်ပါတယ်။
ဒီဘူတာကို နောက်တခေါက်ပြန်ရောက်လာပါပြီ မပန်ရေ။
လာဖတ်တာရော ကွန်မန့်အတွက်ပါ ကျေးဇူးပဲ အစ်မကြီး ခင် ရေ...